Jooji Spam! Khabiirka Cajiibka wuxuu sharraxayaa sida loo Ilaaliyo Emailkaaga
Sanadihii la soo dhaafay dhalashada internetka, hal dhibaato ayaa sii socota iyada oo ay jirto dadaal badan oo lagu dilo. Spam. Qof kastaa wuu neceb yahay - lebanon builder. Mawduuc kasta oo email ah wuxuu sameeyaa waxa ay u suurtogalin karto si loo yareeyo, laakiin waydii qof, waxayna kuu sheegi doonaan in ay sii wadaan helitaanka spam aad u badan. Tani, qayb ahaan, waa sababta oo ah dadku waxay bixiyaan macluumaad ku saabsan iyaga oo aan si dhab ah uga fekerin. Uma baahnid inaad doorato liistada boostada si aad u hesho liiska spam ee qof. Waxay heystaan ​​siyaabaha ay kuugu heli karaan, xitaa adigoon haysan ogolaansho toos ah.
Difaaca ugu fiican ee aad leedahay sida user ah si loo yareeyo qadarka spam samaynta habka loo maro emailkaaga ayaa qarinaya emailkaaga. Waa fikrad aan si ballaaran loo garanayn, laakiin way shaqeysaa. Lisa Mitchell laga bilaabo Semaat waxay bixisaa 5 dariiqo ah oo ku habboon.
Hoosta ka dambeysa imtixaanka
Scr.im waa qalab bilaash ah oo abuuraya URL gaar ah ee cinwaanka emailkaaga. Ku qor cinwaanka emailkaaga, iyo scr.im wuxuu abuuraa URL iyo sidoo kale codsigaaga inaad isticmaasho warbaahinta bulshada, dukumintiyada HTML, iyo forumyada. Tani waxay ka hortageysaa dadka nuqul qoraalkaaga emailka ah adigoo isticmaalaya sida ay jecel yihiin. Haddii qof doonayo inuu ku soo diro email, waxay ku dhuftaan URL iyaga oo u qaadaya imtixaan ay tahay in ay ka gudbaan ka hor intaanad helin cinwaanka emailkaaga. Waa baaritaan in khadka iyo qoraallada automated aysan awoodi karin.
Qalabka sida E-mail Icon Generator wuxuu soo saaraa sawirro ay ku jiraan cinwaanka emailkaaga sida muuqaalka CAPTCHA. Waxa kale oo ay martigalisaa sawirka iyo, sida scr.im, waxay bixisaa codsiga isticmaalka meelo kala duwan.
Qof kasta ayaa hirgelin kara habkan tiknoolojiga hooseeya ee lagu qarinayo cinwaanka emailkaaga laga soo bilaabo bots. Waxa kaliya oo ku lug leh qorista walxo kasta oo cinwaankaaga ah sida eray. Marka, tusaale ahaan, info@abc.com waxay u egtahay sidan marka la xoqdo - faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan abc dot com Ma jiro nidaam toos ah oo aqoonsi doona cinwaanka emailka.
Mailto Encoder waa tusaale ah qalab wax ka qaban kara xalkan. Marka aad ku qorto cinwaanka emailkaaga, qalabku wuxuu ku darsadaa, sameynta tiro taxane ah, xarfo, iyo calaamado aan lahayn calaamad muuqda. Iskudhuujinta ayaa si xawli ah u socon doonta.
Xalka ugu dambeeya waa kan ugu fudud. Kaliya ha siin cinwaanka emailkaaga. Ama qaar ka mid ah dadku waxay sameeyeen cinwaanada emailka oo kaliya oo loogu talagalay spam. Doorasho saddexaad oo si buuxda uga fog in la wadaago cinwaanka emailka waa in la isticmaalo qalab sida WHSPR! taas oo kuu ogolaaneysa inaad abuurto foom ku meel gaar ah oo fariin u diri doonta emailkaaga. Tani waa hab kale oo isticmaala CAPTCHA. Si aad u dirto farriinta, diraha waa inuu ku aflaxaa imtixaanka CAPTCHA.
Email waa qaabka la door bido ee isgaadhsiinta dad badan iyo hay'ado badan maalmahan. Haddii ay la xiriirto asxaabta iyo qoyska, kuwaas oo ku nool meelo fog, la xiriirista loo shaqeeyayaasha ama shaqaalaha, ama hubinta inaad ka ogaato dhamaan iibka ku socda dukaanka aad ugu jeceshahay, waxaad u baahan tahay cinwaanka emailka. Uma baahnid ama aad rabto spam. Iskuday mid ka mid ah hababka kor ku xusan si loo yareeyo qadarka fariimaha aan loo baahnayn oo ku tusaya sanduuqyadaada ama feylkaada.